अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने इच्छा छ - रमाइलो नेपाल डट कम| Ramailoo Nepal
You are at:Home»अन्तरवार्ता»अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने इच्छा छ
अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने इच्छा छ
By Ramailoo Nepal on	 July 24, 2017 अन्तरवार्ता
नेपालमा पाश्चात्य शिक्षाले उन्मूलन गर्नै लागेको वैदिक शिक्षाको पुनर्जागरण अभियानका एक प्रमुख थालनीकर्ता स्वामी डा. रामानन्द गिरि गत गुरुपूर्णिमामा ब्रह्मलीन हुनुभएको १६ दिन पुगेको छ । २०५० सालमा गुरुकुल शिक्षालाई सरकारी मान्यतासहित पढाउने कामको थालनी डा. गिरिबाट तनहुँको देवघाटमा भएको थियो । पछि माओवादीको संस्कृतविरोधी अभियानको दबाबमा सरकारले विद्यालय शिक्षाबाट संस्कृत उन्मूलन गर्ने निर्णय गरेपछि जनताले मुठी उठाएर जिल्लाजिल्लामा गुरुकुल खोल्ने लहर नै चलेको छ । सरकारसँग गुरुकुलको यकिन तथ्यांक छैन ।
रामानन्दकै शैलीमा स्थापना गरेका गुरुकुल र वेदविद्या श्रमको संख्या हाल दुई सयभन्दा बढी पुगेको अनुमान छ । नेपालमा वैदिक शिक्षाको पुनर्जागरणका विभिन्न पक्षबारे शोध गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरिरहेका सञ्चारकर्मी राजेन्द्रराज तिमिल्सिनाका अनुसार हाल नेपालमा कम्तीमा आठ हजार जनाले गुरुकुलमा शिक्षा हासिल गरिरहेका छन् । अध्ययनकै क्रममा शोधकर्ता तिमिल्सिनाले गत जेठ ३ गते भक्तपुरस्थित स्वामी रामानन्दका शिष्य राम भण्डारीको घरमा नेपाली शिक्षा र गुरुकुलको पुनर्जागरणबारे साधुसँग लिएको अन्तर्वार्ता सम्भवतः अन्तिम अन्तर्वार्ता हो । सोही अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत छः-
गुरुकुल खोलेर नेपालमा वैदिक शिक्षाको पुनर्जागरण अभियानको थालनी गर्नुभयो । यसको उद्देश्य के हो ?
म प्राचीन गुरुकुल परम्पराबाट ज्यादै प्रभावित मान्छे हुँ । मलाई बचपनदेखि नै गुरुकुल खोल्ने इच्छा थियो । पठनपाठनमा पनि लागियो । पहिले बनारसतिर गइयो । ठाउँठाउँमा गएपछि अहिले धर्मसंस्कृति चारैतिर लोप भइराखेको बेला एउटा गुरुकुलको स्थापना मर्न लागेको संस्कृतिको बीज जोगाउनका लागि हो । मैले त्यहाँ (देवघाटमा) गुरुकुल खोलेर ठूल्ठूला विद्वानहरू तयार गर्ने भन्ने उद्देश्य त हो, तर हुन सक्दैन ।
किनभने मानिसमा त्यति धैर्य नै छैन । पूरै समर्पित भएर पढ्नु पर्छ । संस्कृतको विद्वान हुनका लागि एउटा युगै जस्तो लाग्छ । अहिले मानिसहरूमा त्यो धैर्य छैन । चारैतिर संस्कृतको पठनपाठनमा बडो ह्रास आएको छ।बनारसमा पनि त्यही हो, नेपालमा पनि त्यही हो । ह्रास आएको हुनाले कमसेकम यसको बीउलाई गुरुकुलको माध्यमबाट बचाउन सकियो भने पछि यसका हाँगाबिँगा लाग्दै जालान् भन्ने मेरो उद्देश्य हो ।
२०५० सालमा महेश गुरुकुल सुरु गर्नुअगाडि नेपालमा गुरुकुलको अवस्था के पाउनुभएको थियो ?
मैले त्यति भ्रमण गरेको त होइन । तर गुरुकुलको परम्परा अल्लि कमै थियो । छँदै थिएनन् त भन्न सक्दिनँ । त्योभन्दा पहिले अलिकति परमानन्दजीले पश्चिम नेपालको दिब्रुङ भन्ने ठाउँमा गुरुकुलको परम्परा प्रारम्भ गर्नुभएको हो । त्यो बेला त्यहाँ पढाएर परीक्षा दिन बनारसतिर पठाउने चलन थियो । नेपालमै परीक्षा प्रणाली त्यति थिएन । गुरुकुलमा पढे पनि परीक्षा दिन बनारसतिर जान्थे । यसलाई परीक्षामुखी बनाएर बकाइदा स्वीकृति लिएर हाइस्कुल लेभलमा पनि, त्यसपछि कलेज लेभलमा पनि संस्कृतको सुरुआत् हाम्रै गुरुकुलले गरेको हो । त्यसपछि अरू धेरै गुरुकुलहरू देखा परेका छन् । त्यो राम्रो लक्षण हो ।
त्यो बेला, ५० सालअघि चरम आधुनिकता र पाश्चात्य प्रभावका बेला, गुरुकुलको पुनर्जागरण भइसकेको थियो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? देवघाटमै पनि वेदका ऋचाको गुञ्जायमान अवस्था अहिलेजस्तो थियो त ?
उत्यो बेला देवघाटमा गलेश्वर विद्यालय थियो, गलेश्वर बाबाले स्थापना गर्नुभएको । पहिलेदेखि नै हो । त्यो बेलामा सामान्य अध्ययन अध्यापन गर्ने चलन त गलेश्वरले गरेकै हो । विशेष रूपमा जागरुकता चाहिँ २०५० सालपछि नै आएको हो । गलेश्वर वेदवेदांग वेद विद्यालय, परमानन्द संस्कृत गुरुकुल र हाम्रो, यी तीनवटा गुरुकुलले धेरै राम्रो काम गरेको जस्तो मलाई लाग्छ ।
अहिले जिल्लाजिल्लामा, गाउँगाउँमा पनि जनस्तरबाट गुरुकुल खुल्दै गएको देखिन्छ । यी गुरुकुलले गुरुकुलको मर्म समातेका छन् वा छैनन् ?
गुरुकुलीय मर्मको कुरोमा अहिले मान्छेमा पढ्ने पढाउने भन्ने कुरामा ह्रास देखिन्छ । विद्वान् बन्नका लागि पूरै कस्सिएर पठनपाठनमा लागेका छैनन् । लटरपटर गरेर जीविका चलाउने, गहिरो अध्ययन चैं छैन । हामीले पनि जुन ढंगबाट गुरुकुलबाट विद्यार्थी उत्पन्न गर्न पर्ने हो त्यो ढंगबाट गर्न सकेका छैनौं । किनभने इन्जेक्सन दिन भएन, पढ्ने त विद्यार्थी नै हो । विद्यार्थीको रुचि नभएपछि, पढ्ने प्रवृत्ति नै नभएपछि हामीले अरू के गर्न सक्छौं र ? तर हामीलाई गौरवको अनुभव छ, हामीले केही योग्य जनशक्ति आफ्आफ्नो गुरुकुलबाट उत्पन्न गराएका छौं । यसमा हामीलाई गौरवको अनुभव छ ।
गौरवको अनुभूति नेपालभरिकै गुरुकुलबाट कि देवघाटका गुरुकुलबाट ?
सबैको त थाहा पनि छैन । कति गुरुकुल पुगे भन्ने मलाई थाहा छैन । देवघाटको सम्बन्धमा चैं म भन्न सक्छु तीनवटा गुरुकुलले संस्कृतको जगेर्नाका लागि ठूलो काम गरेका छन् ।
गुरुकुल शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउने सरकारले नीति लागू गर्दागर्दै पनि गुरुकुलका विद्यार्थी ठूलो संख्यामा परीक्षा दिन भारतमा जाने गरेको देखिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्नुप‌र्‍यो । व्यवस्था मिलाउनु प‌र्‍यो ।
कि नेपालमा परीक्षा पद्धति कडा भएर त होइन, उनीहरू परीक्षा दिन भारत जाने ?
त्यस्तो केही होइन । कडाइदेखि विद्यार्थीले डराउन हुँदैन । योग्य बन्न चाहन्छ भने समस्यासँग जुध्नुप‌र्‍यो । नेपालमा कठिन भए भारतमा गएको भन्ने होइन । सरकारले गर्दैछ भन्ने सुनिन्छ । त्यो राम्रो कुरो हो । शुभ लक्षण हो ।
गुरुकुलमा सरकारी पाठ्यक्रम र पाठ्यपद्धति लागू गरेपछि गुरुकुलको स्वतन्त्रतामा, गुरुकुलीय मर्यादा कायम राख्न चुनौतीहरू आउँलान् कि नआउँलान् ?
त्यसै कारणले हामी तीनवटा गुरुकुलले चैं स्वतन्त्र रूपमा चलाएका छौं । मान्यता प्राप्त मात्रै हौं । सम्बन्धनप्राप्त मात्रै छ । हामीले आफ्नै ढंगबाट चलाएका छौं ।
सरकारी सहयोग, आर्थिक सहयोग पनि लिइएको छैन र ?
आर्थिक सहयोग भनेको त्यही छुटफुट दिने त भिन्दै कुरो हो । तर त्यस्तरी आंगिक बनाएर पूरै सरकारलाई समर्पण गरेका छैनौं । हामीले आफैंले चलाएका छौं ।
गुरुकुलमा अंग्रेजी पनि समावेश गरियो । अब विज्ञान विषय पनि थप्ने कि ? २२-२४ वर्षको अनुभवले के भन्छ ?
उ हो, अंग्रेजी पनि राखेका छौं । वैज्ञानिक कुरा त सबैले सबै पढ्न कहाँ सक्छ र ? तर हामीले त्यही महसुस गर्‍र्यौं- अंग्रेजी चाहिँ प्रसिद्ध भाषा पनि भएको हुनाले र त्यसैमा धेरै कुराहरू भएको हुनाले, अचेल जागिर खान पनि अप्ठ्यारो हुने, स्वतन्त्र विद्यार्थीमाझ कम्पिटिसनमा आउन पनि गाह्रो हुने भएको हुनाले हामीले अंग्रेजी चाहिँ राखेका हौं । हामीले कम्प्युटर साइन्सको अलिअलि शिक्षा दिएकै छौं । अरू हाइस्कुलमा पढाइ हुने सबै विषय उनै हुन्, खाली संस्कृत बढी त हो नि । विज्ञान पढाउने हाम्रो विषय होइन । त्यहाँभन्दा अतिरिक्त सबै त एउटा विद्यार्थीले एक पटकमा कहाँ सक्छ र ? युनिभर्सिटीहरूमा पनि त सबै विषय सबैले पढ्न सक्दैनन् नि । त्यही हो ।
गुरुकुलको स्थापना र सञ्चालन गर्दा कस्ताकस्ता चुनौतीहरू व्यहोर्नु पर्‍र्यो ?
मेरो विषयमा भन्ने हो भने मैले त जनतामा प्रवचन गरेर उनीहरूलाई प्रभावित गराएर उनीहरूको चन्दाद्वारा नै गुरुकुल चलिरहेको छ । आफ्ना भक्तहरू बनाउने, उनीहरूले चन्दा दिन्छन्, सरकारले कहिलेकाहीँ अलिअलि सहयोग पनि गरिराखेको छ । यही ढंगबाट चलाइराखिएको छ । मलाई खास कठिनाइको अनुभव छैन । गुरुकुल चलाउनका लागि हाम्रा भक्तहरूले पर्याप्त मात्रामा सहयोग गरेका छन् ।
अहिले पढाउने जनशक्तिको अवस्था नि ?
होऽऽ । यो चाहिँ अल्लि समस्या छ । योग्य जनशक्ति पाउन निक्कै गाह्रो छ ।
कुन विषयको शिक्षक पाउन समस्या ?
व्याकरणमा त्यस्तै छ, वेदान्तमा त्यस्तै छ । योग्य अध्यापकहरूको कमी चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौं । डिग्री लिएका मान्छेहरू प्रशस्त छन् तर राम्रोसँग बुझाएर निष्ठापूर्वक पढाउने अध्यापकहरूको कमी हामीले महसुस गरेका छौं ।
बन्दोबस्तीको समस्या त रहेनछ । कालान्तरसम्म अघि बढ्न सक्ने प्रत्याभूतिको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
हामीले गर्दै जाने हो । भोलि के हुन्छ भन्ने कसलाई थाहा छ ? हामीहरू आफ्नो शक्तिको अनुसार काम गर्दै जाने हो । योग्य विद्यार्थी तयार गर्न जाने हो, कोसिस गर्दै जाने हो । भविष्यलाई त हामीले के ग्यारेन्टी दिन सक्छौं र !
महेश संस्कृत गुरुकुलको भौतिक सुविधा हेर्दा विश्वविद्यालय खोल्न सकिने पूर्वाधार रहेछ । त्यस्तो केही योजना छ कि ?
मलाई विश्वविद्यालय खोल्ने रहर केही पनि छैन । मर्न लागेको संस्कृतको बिउ जोगाउने मेरो इच्छा हो । गर्दै जाँदाखेरि विश्वविद्यालय बनेछ भने राम्रै हो । तर विश्वविद्यालय मात्रै बनाएर के गर्ने ? त्यसअनुसारको पठनपाठन हुनुपर्‍र्यो । फेरि राजनीति हुन थाल्छ । राजनीतिको अखडा बनिराखेका छन् अहिलेका शिक्षणसंस्था । त्यस्तो विश्वविद्यालय मलाई चाहिएको छैन । शिक्षणसंस्थालाई राजनीतिको अड्डा बनाउने होइन ।
नेपालका गुरुकुलबाट उत्पादित जनशक्तिको बजार कस्तो छ नि ?
अरूको त मैले कसरी भन्नु ? हाम्रो गुरुकुलबाट निक्लिएका विद्यार्थी खाली कोही पनि छैनन् । हामीले लद्दुभन्दा पनि लद्दु भनेको विद्यार्थीले पनि तुरुन्तै जागिर पाइरहेको हुन्छ । महेश गुरुकुलका विद्यार्थी भनेपछि चाँडै नै जागिर पाउँछन् । त्यो चाहिँ हामीलाई गौरवको विषय हो ।
खासगरी केके काम पाउँदा रहेछन् ?
संस्कृतमा शास्त्री पास गरेपछि नेपाली एमएतिर जान्छन् । हाइस्कुलमा, विश्वविद्यालयमा पढाउने काम पाउँछन् । बिकिराखेका छन् ।
आचार्यसम्म गरिसकेपछि अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि हात हाल्नेबारे केही योजना छ कि ?
अनुसन्धान गराउने मेरो विचार छ । अनुसन्धान लेभलमा यसलाई लान पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा चाहिँ छ । कोही अनुसन्धाता आएर सहयोग ग‌र्‍यो भने बिल्डिङहरू बनाएर अनुसन्धान गर्ने । हाम्रो एउटा शिष्य छ दिवाकर आचार्य अहिले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा पढाउने । मलाई वचन दिएको छ । उसले यहाँ आएर अनुसन्धान गराउँछु भनेको छ । हामीलाई त्यो आशा छ । अनुसन्धान गराउन मात्र खोजेर भएन, जनशक्ति हुन प‌र्‍यो । महेश गुरुकुलको परिसरभित्र अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने इच्छा छ ।
त्यो भनेको पीएचडी लेभलको पढाइ चलाउने हो ?
हो, हो । पीएचडी गराउने । सब गराउने ।
अहिले गुरुकुलबाहिर हेर्दा हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीबारे के टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?
नेपालको शिक्षा प्रणाली दोषयुक्त छ । यसमानेमा दोषयुक्त छ कि यहाँ चरित्रमाथि पटक्कै ध्यान दिइँदैन । नैतिक शिक्षा छैन । खाली एउटा जीविकोपार्जन गर्ने भाँडोमात्रै तयार गर्छ सरकारले । बाबुआमालाई कसरी मान्न पर्छ, गुरुको स्थान के छ, धर्म के हो संस्कृति के हो, सभ्यता के हो, यसमा शून्य भएकोले यो शिक्षा पद्धतिप्रति म सन्तुष्ट छैन । त्यही शिक्षा पद्धतिबाट सन्तुष्ट नभएरै हो मैले गुरुकुल खोलेको । मैले पहिले संघर्ष गरेको हुँ । मन्त्रीहरूसँग पनि भनेको हुँ । मैले भनेर केही नहुने रहेछ भनेर मैले आफ्नो स्वतन्त्र गुरुकुल खोलेको हुँ ।
संस्कृत शिक्षा पढेकाहरूप्रति यस्तो राम्रो धारणा छ । तर संस्कृत नै पढेर विश्वविद्यालयमा पुगेकाहरूको त त्यस्तो व्यवहार देखिँदैन भन्छन् । त्यसलाई के भन्ने नि ?
त्यो सरकारको कुरा हो । त्यहाँका प्रोफेसरले विचार गर्न पर्ने हो । त्यहाँका प्रशासकहरूले विचार गर्न पर्ने हो । उपकुलपति, शिक्षाध्यक्षहरूले नियन्त्रण गरेर व्यवस्थित गर्नु पर्ने हो । मेरो विषय होइन त्यो ।
संस्कृत पढेका, गुरुकुलमा पढेका र पछि अध्यापक भएकाहरूले पनि त्रास सिर्जना गर्ने उपायको ताल्चाबन्दी गरे भनेर औंला ठड्याउने ठाउँ त मिल्यो नि?
त्यो त व्यक्तिको दोष हो । संस्कृतले तालाबन्द गर भन्दैन । व्यक्तिले त जे पनि गर्छ नि । व्यक्तिको दोष लगेर कुनै शिक्षा प्रणालीमा हाल्न मिल्दैन ।
प्रसंगलाई संस्कृत माध्यमिक विद्यालयतिर मोडौं । देशका विभन्न ठाउँमा सरकारी संस्कृत माविहरू सञ्चालनमै छन् भने अर्कोतिर जनताले मुठी उठाएर र चन्दा दिएर धमाधम गुरुकुल खोल्ने क्रम अघि बढेको देखिन्छ । अब ती पुराना संस्कृत मावि र प्रधान पाठशालाहरूको भविष्य के होला ?
त्यो मेरो विषय होइन ।